कहिलेसम्म निमुखा जनता भगवान् भरोसामा बाँच्ने ? - Nice Samachar
दीपा आलेमगर २५ आश्विन २०७७, आईतवार २२:२६ 257 पटक हेरिएको
काठमाडौँ । गत डिसेम्बर अन्तीम सातादेखि चाइनाको मुहान बाट सुरु भएको विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्न थालेको पनि झण्डै एक वर्ष पुग्न थालेको छ । तर आजको दिनसम्म आई पुग्दा समेत कोरोना भाइरस घटनुको साटो दिनप्रति दिन बढ्दै गइरहेको छ । त्यो क्रम विश्वका देशहरु लगायत नेपाल पनि अछुतो रहेको छैन । पछिल्लो पटक नेपालमा पनि कोरोना भाइरस तिव्र गतिमा बढ्दै गइरहेको छ । जसले गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालय समेत आत्तिएर यति बेला आम मानिसहरुलाई आफ्नो सुरक्षा आफै गरौं भन्नेसुचना समेत दिइसकेको अवस्था हो ।
एकातिर नेपालीहरुको महान चाडहरु घरआँगनमा भित्र थालिसकेका छन् भने अर्को तिर यो कोरोना भाइरस घटनुको साटो झनै बढ्दै गइरहेको छ । जसले गर्दा देश विदेशमा बसोबास गर्ने आम नेपालीहरुमा नैरश्यताले छाईरहेको छ । यो कोविडकै कारण न त स्वदेशमा बस्ने नेपालीहरु सुखी खुशी नै छन् न त विदेशमा कामको सिलसिला गएका नेपालीहरु नै खुशी छन् । यति बेला नेपालीहरु मात्र होइन विश्वभरका मानवहरुले कोरोना भाइरसको डरत्रासमा जीवन जीउन बाध्य भएका छन् । अझ नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा यो कोरोना भाइरसको संक्रमणले गर्दा नेपाली जनताहरुको जीवनयापन दिनदिनै कष्टकर बन्दै गईरहेको छ । तर राज्यले नेपाली जनतालाई बचाउनकोलागि आजको दिनसम्म पनि कुनै बैकल्पीक योजनाहरु तयार पार्न सकिरहेको छैन । नेपाली जनताहरु आजका दिनसम्म पनि भगवान भरोसामा बाँच्न विवश छन् ।
यो आलेख लेख्दै गर्दासम्म पछिल्लो २४ घण्टामा थप २ हजार ७१ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या एक लाख ७ हजार ७ सय ५५ पुगेको छ । त्यसैगरी संक्रमितको संख्या ३१ हजार ३ सय १५ रहेको छ । कोरोना भाइरस बढ्दै गर्दा पछिल्लो पटक काठमाडौंमा झनै तिव्र गतिमा फैलिएको छ । आज मात्र काठमाडौं उपत्यकामा थप १४ सय १६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसकारणले गर्दा पनि प्रत्येक मानिसमा कहिकतै मानसिक तनावले कमजोर भइरहेको महसुस गरेका छन् र कोरोना भाइरसको सामना गर्दै जीवन बिताउन बाध्य छन् ।
यति बेला के बालक के युवा के वृद्धवृद्धा सबैको दिलदिमागमा कोरोना भाइरसको त्रासले विश्व आक्रान्त बनाइरहेको छ । कोरोना भाइरसबाट उच्च संक्रमणमा रहेका देशहरु मध्ये सबै भन्दा बढी कोरोना संक्रमित संयुक्त राज्य अमेरिकालाई असर पारेको छ । यो लेख लेख्दासम्म अमेरिकामा कोरोना भाइरसको संक्रमितको संख्या ७९ लाख ४५ हजार नाघेको जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयले आइतबार जानकारी दिएको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वको तुलनामा सबैभन्दा बढी मानिसको मृत्यु पनि अमेरिकामा नै भएको छ । अहिलेसम्म अमेरिकामा मृत्यु हुने व्यक्तिको संख्या दुई लाख १८ हजार नाघिसकेको छ ।
त्यसैगरी कोरोना संक्रमणको कारण दोस्रो स्थानमा भारत रहेको छ । अहिलेसम्म भारतमा ७० लाख ५३ हजार भन्दा बढी संक्रमित भएका छन् भने संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या एक लाख ७ हजार ३ सय ७१ जना पुगीसकेको छ । त्यस्तै कोरोना संक्रमणबाट तेस्रो स्थानमा ब्राजिल छ । अहिलेसम्म ब्राजिलमा ५० लाख ९१ हजार नाघेको छ । संक्रमणको कारण अहिलेसम्म एक लाख ५० हजार भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ । त्यसैगरी रसिया, कोलम्बिया, स्पेन, अर्जेन्टिना, मेक्सिकोमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएको छ ।
हालसम्म विश्वभर कोरोना भाइरसको महामारीको रुपमा फैलिएको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या आइतबारसम्म १० लाख ७७ हजार ६ सय ३० जना पुगेको छ । यस भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या विश्वभर तीन करोड ७४ लाख ७८ हजार पुगेको छ । कुल संक्रमितमध्ये दुई करोड ८१ लाख १८ हजार भन्दा बढी निको भएका छन् भने करिब ८२ लाख ८२ हजार मानिसमा सक्रिय संक्रमित छन् । विश्वभर अझै पनि ६८ हजार भन्दा बढी मानिसको स्वास्थ्य अवस्था निकै नै जटिल रहेको तथ्यांकले जनाएको छ । त्यसैगरी नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको कुल संख्या ६ सय ३६ पुगेको छ । हालसम्म विश्वमा २ सय १५ वटा देशमा कोरोना भाइरस फैलिसकेको छ । डब्लुएचओको अनुसार विश्वभर प्रत्येक दिन चार हजार भन्दा बढी कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको पनि बताएको छ ।
समय आफ्नै रफ्तारमा अघि बढीरहेको छ । मानिसहरुले सरल तरिकाले आफ्ना कामकाज गर्न पाएका छैनन् । हाम्रो जस्तो गरिब राष्ट्रमा यसरी कोरोना भाइरस तिब्र गतिमा बढ्दै गर्दा यति बेला उपत्यकामा भएका कोविड अस्पतालमा विरामी भरिभराउ भएर विरामी राख्ने ठाउँ समेत छैन साथै आईसियुबेडको अभाव भएको छ । बाहिर जिल्लामा पनि कोरोना संक्रमित बढ्न थालेपछि आईसियुको अभाव बढ्दै गईरहेको छ । कोविड अस्पतालको घोषणा गरेपनि अस्पतालमा चाहिने दक्ष जनशक्तिको कमि देखिएको छ । जसले गर्दा कोरोना संक्रिमतहरुले सहज तरिकाले अस्पतालमा उपचार गर्न समेत बञ्चित हुने सम्भावना त्यतिकै देखिएको छ । किन कि कोरोना भाइरस घट्नुको साटो बढ्दो क्रममा छ ।
एकातिर दिनहुँ कोरोना भाइरसको संक्रमित बढी रहेको छ भने अर्को पक्ष स्यंम मानिसलाई कोरोना भाइरस लागेपछि सही ढंगले उपचारको व्यवस्थापन समेत नहुँदा विरामी मानिसहरुको मनोबल कमजोर भईरहेको अवस्था छ । लामो समयको लकडाउनका कारण मानिसहरु गास,बास र कपासको जोहो गर्न नसकेर यति बेला निमुखा जनताहरु निकै नै कष्टकर जिवनयापन गर्न बाध्य भएका छन् भने कतिपय यो लडडाउनकै समयमा आत्मा हत्या गरेर मरेका छन् । हत्याहिंसा, चोरीडकैती, बलात्कार जस्ता जगन्य अपराधहरु बढ्दै गईरहेको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने यो समय निकै निरासाजक अवस्थामा गुज्रीरहेको छ । हुन त देशमा नियम कानुन संविधान सबै छ तर व्यवहारमा लागु भने हुन सकेको छैन ।
समय परिस्थिति हेरेर सरकारले आफ्ना जनताहरुलाई कसरी यस्ता भैपरी घटनाहरुबाट बचाउन सकिन्छ त्यता तिर सोंच्नु पर्ने हो तर अहिलेसम्म कुनै पनि दिर्घकालीन योजनाहरु निर्माण गर्न सकेका छैनन् । जसले गर्दा यसको प्रत्यक्ष असर निमुखा जनताहरुले भोग्नु परेको छ । कोरोनाको असरबाट पीडित जनताहरुको मनोबल कसरी उच्च राख्न सकिन्छ त्यसबारेमा पनि सरकारले योजनाहरु ल्याउन सक्नुपर्दथ्यो तर अहिलेसम्म पनि कुनै पहल गर्न सकेको छैन । जसले गर्दा जनताहरु कोरोनाको असरले गर्दा आत्माबल कमजोर बनाएर पनि कतिपय मानिसले ज्यान गुमाउनु परेको वास्तविकता हो । साँच्चै भन्ने हो भने दुई तिहाईको सरकारले यो कठिन र पीडादायी घडीमा जनतालाई कसरी सुरक्षित राख्र्दै संरक्षण संबद्धन गर्ने हो भन्ने विषयमा आजको दिनसम्म पनि सोंच्न सकेको छैन । केवल सत्ता र शक्तिको भागबन्डामा नै सरकार तलिन देखिन्छ । जनताहरु यो बेला बेरोजगार भएर खान नपाएर चौक चौराहा र बाटोका पेटीहरुमा लाम लागेर बसीरहेका छन् उनीहरुको दुखदायी अवस्थामा सरकारको कतिपनि ध्यान जान सकेको छैन ।
नेपाली जनताले आफ्नो ज्यानको आहुति दिएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा भित्र्याएपनि आजका दिनसम्म निमुखा जनताले राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा र अपन्त्वको आभाष गर्न पाएका छैनन् । आज कोही कोरोनाको कारणले मानिसहरुले ज्यान गुमाउनु परेको छ भने कोही खान नपाएर भोकभोकै मर्नु परेको छ । महिला त बालबालिकाहरु दिनडाडै पापी दानवहरुको हातबाट बलातकृत भई अकालमा मर्नु परेको छ । देशमा संविधान आयो तर ति संविधान लेखिएका नियम कानुनहरु ति गरिब निमुखा जनताको हकमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अझ संविधानमा मौलिक अधिकारको प्रत्याभूति गर्न पाउने धारा र उपधाराहरु लेखिएका छन् तर आज आफ्नै देशका जनताहरुले खान नपाएर मर्नु परेको तितौ यथार्थ हाम्रो आँखा वरिपरि घुमिरहेको छ आफ्नै देशमा एउटा बालिकाले बलात्कृत भएर ज्यान गुमाउनु परेको छ तर राज्य भने निरिह भएर टुलुटुलु हेर्ने काम मात्र भईरहेको छ । देशमा भईरहेको भष्ट्रचार विरुद्ध आवाज उठाएर राज्यलाई खबरदारी गर्दै २६ दिनसम्म सत्याग्रह अनसनमा बसेका डा. केसीको मागलाई समेत सरकारले वेवास्ता गरेकै हो तर आज मात्र ८ बुँदे सहमति भएको छ । अब त्यो आठ बुँदे सहमति पनि कहिले पुरा हुने हो थाहा छैन । कुलमान घिसिङ्गको विषयमा पनि जाबो एउटा कानुनी निर्णयमा विचाराधीन बनाएर आजसम्म यो सरकारले सही निर्णय गर्न सकेको छैन । यावत थुप्रै जनताका चाहना र आवश्यकताहरुलाई सरकारले बेवास्ता गरेकै छ । दुई तिहाईको दम्मले आज खुलेआम नेपाली जनतालाई विचारगत दृश्यले हेर्ने काम भईरहेको छ ।
यो दुई तिहाईको सरकारले चाहयो भने जनताको हितकोलागि जे पनि काम गर्न सक्छ तर सरकार गर्न चाहदैन । चाहान्छ त केवल आफ्नै मात्र पेट भर्न जसले गर्दा आज जनताहरु बाध्य भएर मर्नु परेको छ । न त आफ्नो देशमा रोजगारको सिर्जना गर्न सकिएको छ । अझ पनि यो कोरोना भाइरस छिटटै निर्मूल होला जस्तो छैन । यसरी बढ्दै गएको यसको रुपरेखा हेर्दा अबको ६,७ महिना अझ यसले आफ्नो संक्रमण फैलाउने कार्य जारी राख्ने जस्तो देखिएको छ । त्यसले गर्दा अब सरकारले ढिलाई नगरी कसरी हुन्छ जनतालाई बचाउनतिर लाग्नुपर्छ । जनताको गास,बास, कपास,शिक्षा स्वास्थ्यलाई ध्यान दिई त्यही अनुसारको छिटो छरितो कार्ययोजना ल्याउन सक्नुपर्छ । कोरोना संक्रमित बढ्दैछ भने कोविड अस्पतालमा के के चिजहरुको अभाव छ । के कस्ता दक्ष जनशक्तिहरु चाहिन्छ ? व्यवस्थापन पक्ष कस्तो बनाउने यो विषयमा केन्द्रीय सरकारदेखि प्रदेश र स्थानीय हुँदै वडासम्ममा सरकारले सम्पूर्ण जनशक्ति मिलाउनुपर्छ । अर्को तिर आम नेपाली जनतालाई कोरोनाबाट बचाउनकोलागि र उनीहरुको मनोभावनालाई उच्च राख्नकोलागि त्यस्ता खाले मनोपरापर्श चेतनाका शिक्षा दिन पनि जरुरी छ । किन कि आत्मा शक्ति बलियो भयो भने मात्र मानिसहरु जस्तो सुकै अवस्थामा पनि बाँच्न सक्छ । त्यसैगरी घरवार विहिन भएर सडकपेटीमा बस्न बाध्य नेपाली जनताहरुलाई चाँडो उचित ठाउँमा व्यवस्थापन गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्छ । दिन दिनै चाँडबाँड मुखमा आईसकेको छ यस्तो बेला चोरीडेकैती बढ्ने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ यस तर्फपनि सरकारले प्रहरी प्रशासनलाई सुचारु रुपमा अघि लग्न अहिलेबाट नै कदम चलाउनु पर्ने देखिन्छ । अर्को कुरा कोरोना तिब्रगतिमा बढीरहेको बेला स्कुलहरु खोलिएका छन् केही बन्द भएका छन् यस विषयमा पनि सरकारले तत्काल ध्यान पुराउनुपर्छ किनकि मानिसको शरीर भन्दा ठूलो कुरो अरु केही होइन कोरोनाबाट बच्न सके कोरोना निर्मूल भए पछि स्कुल विद्यालयहरु, कार्यालयहरु खोलेर अध्ययन र अध्यापन्न गराउन र गर्न सकिन्छ । यस विषयमा सरकारले तत्काल ठोस निर्णय गर्न जरुरी छ यदि समयमै ठोस निर्णय गर्न सकिएन भने कोरोना भाइरसको संक्रमणले पुरा समुदायमा प्रवेश गरेर धेरै मानिसको ज्यान लिन पनि सक्छ । त्यसकारण सरकारले बेलैमा वास्तविकलाई मध्येनजर गर्दै अहिले सत्ता र शक्तिको लुछाचिडी भन्दा पनि यो अवस्थामा कसरी आफू पनि बच्ने र जनतालाई पनि बचाउने भन्ने अभियानमा लाग्न सक्यो भने अवश्य पनि आउने दिनमा सबैको भलो हुने थियो । यस तर्फ सरकारको ध्यान चाँडो भन्दा चाँडो जावस् । साथै कोरोना भाइरसको संक्रमण तिव्र गतिमा बढेको हुनाले हामीसजक र सुरक्षित हुन जरुरी छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत यति बेला आम मानिसहरुलाई आफ्नो सुरक्षा आफै गरौं भन्ने सुचना समेत दिइसकेको अवस्था हो । त्यसैले हामी सबै जना आफू पनि सुरक्षित हुँदै अरुलाई पनि सुरक्षित बनाउन मद्दत गर्न सक्नुपर्छ ।
भागबन्डा गर्ने यो समय
के जवानी दुषित वा